access_time2years ago account_circleAung Moe Oo
အမတစ်ယောက်တိုက်တွန်းချက်အရ ရေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ စာပေသူခိုးတွေ၊ ဘာတွေ အပြောများလာတော့ ကျနော့အနေနဲ့ စာပေသူခိုးလို့ ယူဆလို့ရတာကို နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေဆက်ပြီး ကျနော်လက်ခံတဲ့ Remix တွေအကြောင်းပါ ထည့်သွင်း ပြောသွားချင်ပါတယ်။
စာခိုးချတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကလို ဤသည်၍မလွဲခိုးချမှ စာသူခိုးလို့ ပြောလို့ရတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့နှစ်မျိုးနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာ ပိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ စာပေတင်ပြပုံနှင့်ရေးဟန်ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာပြောရမှာက လူတစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ရေးဟန်ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီရေးဟန်ကလည်း
လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတယ်။ ဥပမာ ကျနော့စာရေးဟန်မှာဆိုရင် မူရာကာမီနှင့် မြင့်သန်းကို တုပထားတာ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပင် လွှမ်းမိုးစေကာမှု ကျနော့ရေးဟန်က ကျနော့ရေးဟန်ပဲဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ အလျင်းသင့်လို့ပြောရရင် ဒုတိယ တာရာမင်းဝေတွေ ဒုတိယ အကြည်တော်တွေ တော်သင့် ပါပြီ။
ဟဲမင်းဝေးနောက်ပိုင်း ဒုတိယဟဲမင်းဝေးတွေ ဘယ်သူမှမအောင်မြင်တာကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရေးဟန်ကိုယ့် ဟာကိုယ် တည်ထောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စာရေးတာဟာ တခြားစာရေးဆရာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှု ရှိမှာအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်တစ်ခုကို ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ စာပေတင်ပြပုံပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ စာပေရေးသားတယ်ဆိုတာ ဖန်တီးမှုပါ။ ဖန်တီးမှုဆိုတာ ဟန်နဲ့တင်ပြပုံ။ တစ်နည်းအားဖြင့် Style and Presentation ကို အဓိကစဉ်းစားရမှာပါ အဲဒီနောက်ကမှ Plot လိုက်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ style နီးစပ်ရင်တောင် Presentation မတူပါဘူး။
ထပ်ဥပမာပြပါမယ်။ (ဒီနေရာမှာ Presentation ကို ဖရိမ်လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုပါမယ်)။ မူရာကာမီရဲ့ Norwegians Wood ဟာ Realistic အကျဆုံး ဝတ္တုတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုစမှတ်ပြုပါတယ်။ သူ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဖရိမ်ကို ကျနော်တို့ကြည့်ရအောင်။
၁။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိတယ်၊ နှစ်ယောက်ကရည်းစား၊ တစ်ယောက်က ဘက်ပဲ့နေ
၂။ အတွဲထဲက ကောင်လေးက သတ်သေသွား၊ မင်းသားက အဆောင်မှာနေရင်း မင်းသမီးနဲ့ပြန်တွေ့၊ တူတူလမ်းတွေလျှောက်
၃။ မင်းသားကိုခင်တဲ့ စော်ကြည်ဘဲတစ်ပွေနဲ့ပေါင်းပြီး စော်တွေရှုပ်
၄။မင်းသမီးက မင်းသားကိုချစ်ပေမဲ့ ရူးပြီးအရူးထောင်ရောက်သွား၊ အဲဒီအချိန် မင်းသားက ဒုတိယ မင်းသမီးနဲ့တွေ့
၅။ ဒုတိယမင်းသမီးကလည်း ရည်းစားရှိရက် မင်းသားကိုကြိုက်၊ ဒါပေမဲ့မင်းသားက မင်းသမီးကိုပဲ
၆။ မင်းသားက မင်းသမီး အရူးထောင်စီသွားလည်၊ အဒေါ်ကြီးနောက်တစ်ယောက်နဲ့ပါခင်၊ အဲဒီအဒေါ်ကြီးက ဂစ်တာတွေတီးပြ
၇။ မင်းသားက ဒုတိယမင်းသမီးကို ဂရုမစိုက်လို့ ကွာပြဲ
၈။ မင်းသမီးက ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်သေ၊ အဒေါ်ကြီးက အရူးထောင်က ထွက်လာပြီး
၉။ မင်းသားက နောက်ဆုံးမှာ ဒုတိယမင်းသမီးဆီ ဖုန်းဆက်
ဒါက Norwegians Woods ရဲ့ ဖရိမ်ပဲ။ ဒီလိုမျိုး ဇာတ်လမ်းတူကော ရှိနိုင်လားမေးရင် ရှိနိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တင်ပြပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖရိမ်ကထပ်တူကျမနေသင့်ဘူး။ ရေးဟန်က ပိုတောင်ကွဲပြားခြားနားရမယ်။ ဒါဟာ စာရေးခြင်းအနုပညာလို့ ခေါ်တယ်။ ဒီ ဖရိမ်ကော ရေးဟန်ကော တူနေပြီဆိုတာ မခိုးချပါပဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ စု တု ပြု မဟုတ်ဘူး စု တု ခိုး ပဲ။
ဒီနေရာမှာ တခြားဘက်က အမြင်လေးကို ပြောရဦးမယ်။ Kirby Ferguson ရဲ့ Embrace The Remix က အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းပြောချင်တယ်။ Bob Dylan ကို အတော်များများက Voice Of Generation လို့ခေါ်ကြတယ်။ လူနည်းစုကတော့ သီချင်းသူခိုးလို့ သမုတ်ကြတယ်။ ဥပမာ Masters of war ဆိုရင် Nottamun Town ကို ခိုးချထားတယ်။ With God On Our Side ဆိုရင် The Patriot Game ကနေ ခိုးချထားတယ်။ Woh's Gonna Your Ribbons ကနေ Don't Think Twice , It's Alright အစရှိသဖြင့် ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောရမှာက Where is ur creative work contribute ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေက တခြားဟာက လာတယ်ဆိုတာ ကျနော်လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖရိမ်အတိုင်း ပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာတော့ ဒါက ခိုးချခြင်းပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်အသိဉာဏ်ဖန်တီးမှု ပေါင်းထည့်ခြင်း ရှိမရှိဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့ကိုစာရေးဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့အမရဲ့ စကားကိုပဲ ပြန်လည်ညွှန်းဆိုရရင်
"အသိဉာဏ်သယံဇာတ ကုန်ခမ်းတာဟာ သဘာဝသယံဇာတ ကုန်ခမ်းတာထက် ပိုဆိုးတယ်"။
ကျနော်တို့ဟာ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို Google ကနေ မြန်မာလိုပြန်ပြီး Native Content
လုပ်စားကြတော့မှာလား? နာနတ်သီးကနေ HIV ကူးပါတယ်ကို ဘာသာပြန်ထည့်ပြီး သတင်းအနေနဲ့ထည့်တော့မှာလား? အသိဉာဏ်ကို အဆိပ်ခပ်နေကြတော့မှာလား?
အဲဒီတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရမှာက ကိုယ်ပိုင်ဖလိုး၊ ကိုယ်ပိုင်ဖရိမ်ရှိမှ စာရေးဆရာ
လုပ်စားသင့်ကြောင်း၊ မဟုတ်ရင် စာလုံးမတူတာနဲ့ စာမခိုးဘူး ပြောလို့မရဘူးလို့ ထင်မိကြောင်း
အဓိက စု တု ပြုလား စု တု ခိုးလားဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ Creative Work နားလည်မှု ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းပေါ် မူတည်ကြောင်းပါ။
ဒီ​ေနရာမွာ တျခားဘက္​က အျမင္​​ေလးကို ​ေျပာရဦးမယ္​။ Kirby Ferguson ရဲ႕ Embrace The Remix က အ​ေၾကာင္​း​ေလးကုိ နည္​းနည္​း​ေျပာခ်င္​တယ္​။ Bob Dylan ကို အ​ေတာ္​မ်ားမ်ားက Voice Of Generation လို႔​ေခၚၾကတယ္​။ လူနည္​းစုက​ေတာ့ သီခ်င္​းသူခိုးလို႔ သမုတ္​ၾကတယ္​။ ဥပမာ Masters of war ဆိုရင္​ Nottamun Town ကို ခိုးခ်ထားတယ္​။ With God On Our Side ဆိုရင္​ The Patriot Game က​ေန ခိုးခ်ထားတယ္​။ Woh's Gonna Your Ribbons က​ေန Don't Think Twice , It's Alright အစ႐ွိသျဖင္​့ ျဖစ္​​ေနတယ္​လို႔​ေျပာၾကတယ္​။